Iflethi okanye indlu ekwicomplex encinci ekwicomple - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex encinci ekwicomple
Igumbi elinegumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela labucala, elizimeleyo ngokupheleleyo, kunye nekhitshi eliqhelekileyo kunye negumbi lokutyela. Yinxalenye yeCasona de Muyurina, indlu eyakhiwe ngobukoloniyali, ukususela ngo-1770, elungiswe ngokutsha ngokupheleleyo. Indawo ezolileyo, eneegadi ezithe gabalala nezinamakhulu eminyaka (nemithi eneminyaka engaphezu kweyi-200). Kwindawo ehlala abantu esixekweni, imizuzu eyi-20 ukusuka kwidolophu, uhamba ngeenyawo, kunye nemizuzu eyi-5 ukuya kweyi-10 ngezithuthi zikawonke-wonke, kukho ibhloko eyi-1. Indawo eqhelekileyo yeevenkile zokutyela neekhefi ezikufutshane, iibloko eziyi-5 ukuya kweziyi-7.
I-La Casona inendawo yokusebenzela iinkomo neendawo zokuphumla eziqeshwayo. Ilungele umsebenzi okanye ukuphumla, ukuze kubekho uxolo lwendalo. I-La Casona de Muyurina isezantsi kweSerranía de San Pedro kwaye ikude neGadi yeBotanical yesixeko. Ikwayindawo ekude neRio Rocha, umlambo omkhulu wesixeko.
I-La Casona ikwindawo yokuhlala yesintu yaseCochabamba, eMuyurina. Ngumgama wemizuzu eyi-7 ukuya kweyi-10 ukusuka e-Boulevard de lareonleta, indawo yesintu yeevenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye ne-disco. Le ndawo ikhuseleke kakhulu kwaye inokhuseleko lweendawo ezikufutshane iiyure eziyi-24. Iphantsi kwenduli yaseSan Pedro, apho kukho iCristo de la Concordia, eyona ndawo iphambili yesixeko saseCochabamba
Ndiza kufumaneka ngokupheleleyo, njengoko ndineofisi yam eCasona.